Ị nọ ebe a: Home / Mission
Ụfọdụ na-anakọta stampụ, m na-anakọta ezigbo nhazi "ugbu a" site na gburugburu ụwa.
Ihe ọ bụla ha bụ ochie ngwọta, ngwọta ndị na-adịbeghị anya ma ọ bụ ihe ọhụrụ ngwọta, ha ga-anakọta na nkewa! Ihe ọ bụla ha bụ ngwaahịa, usoro, echiche, igwe, ha ga-anakọtara na nkewa!
Otu ọnọdụ naanị: ha ga-adịrịrị taa ma enwere ike iji ya ugbu a idozi, dozie, gwọọ ma melite ụwa anyị. Ebumnuche: otu na ọtụtụ mmekọrịta! Ngwongwo ohuru ohuru nke na-eji 50% erughi ala eletrik nwere mmetuta nye gi na uwa uwa. Ihe nchekwa stovu nke nwere oru 70% na-ere ọkụ ka enwere mmetụta na ezinụlọ dum. Igwe nke na - eme ka mmiri si na ikuku dị jụụ nwee mmetụta na obodo dum!